Golaha wasiiradda Puntland oo Somaliland uga digay in ay sanaadiiqda doorashada geeyaan gobolada Sool, Cayn, Sanaag iyo Hayland - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandGolaha wasiiradda Puntland oo Somaliland uga digay in ay sanaadiiqda doorashada geeyaan gobolada Sool, Cayn, Sanaag iyo Hayland
November 9, 2017 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Sawirka: Shirka Golaha Wasiiradda Puntland. [xigashada Sawirka: Xafiiska Warfaafinta Madaxtooyada]
Garoowe-(Puntland Mirror) Golaha wasiiradda Puntland ayaa sheegay in gobolada Sool, Cayn, Sanaag iyo Hayland aysan ka dhici doonin doorashada Somaliland, sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay shirkii asbuuclaha ahaa ee golaha.
Golaha wasiiradda ayaa intaas ku daray in Puntland ay ilaalinayso nabadgelyada iyo xasiloonida Soomaaliya, isla markaana aysan ogolaan doonin daandaansiga ka imaanaya maamulka Somaliland ee ku aadan xuduudaha dowladda Puntland.
Shirka asbuuclaha ah ee golaha wasiiradda oo maanta oo Khamiis ah ka dhacay magaalada Garoowe ayaa waxaa shir guddoominayay madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali.
Dhawaan, baarlamaanka Puntland ayaa dood dheer ay yeesheen ku sheegay in goboladaas aan la keeni karin sanaadiiqda doorashada Somaliland oo la filayo in ay dhacdo dabayaaqada bishaan November.
June 9, 2017 Kadib todobo sanno oo dagaal dhiig badan ku daatay Al-Shabaab weli waxay khatar ku tahay Puntland